Kedu ka OTT Teknụzụ si eweghara TV gị | Martech Zone
Ọ bụrụ n ’ị ingụtụla - were lee usoro TV na Hulu ma ọ bụ lelee ihe nkiri na Netflix, mgbe ahụ ị jirila n’elu-n’elu ọdịnaya na ọ nwere ike ọ maghịdị ya. A na-akpọkarị ya OTT na obodo agbasa ozi n'ikuku na teknụzụ, ụdị ọdịnaya a na - agabiga ndị na - eweta ihe nkiri TV ndị ọdịnala ma jiri Internetntanetị mee ihe maka ịkwanye ọdịnaya dịka ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ọbìa Ihe ma ọ bụ n'ụlọ m, ọ bụ Downton Abbey.
Ọ bụghị naanị na teknụzụ OTT na-eme ka ndị na-ekiri ihe nkiri na ihe nkiri na pịa bọtịnụ, mana ọ na-enyekwa ha nnwere onwe ime nke a n'okwu nke aka ha oge ọ bụla ha chọrọ. Chee echiche banyere ya obere oge. Ugboro ole gara aga ka ị ga-ehulata site na atụmatụ n'ihi na ọ nweghị ụzọ ị ga-esi mechaa oge egwuregwu nke oge ngosi TV kachasị amasị gị?
Azịza ya bụ ma eleghị anya tupu ewebata VCR na DVRs - ihe m na-achọ ikwu bụ na otu anyị si eri mgbasa ozi agbanweela n'ụzọ dị egwu. Teknụzụ OTT ewepụla ihe mgbochi dị n'etiti ndị na-eweta ọdịnaya na ndị ọrụ ka na-enye ndị na-eri nri ohere ịnweta mmemme mmemme ha tụrụ anya site na nnukwu ihe nkiri na ụlọ ọrụ TV. Ọzọkwa, ekwuru m na ọ bụ n'efu n'efu?
Tupu iwebata ọdịnaya OTT - ihe mbụ a maara banyere okwu a bụ na akwụkwọ 2008 Okwu Mmalite nke Injin Nchọgharị vidiyo nke David C. Ribbon na Zhu Liu dere, Omume TV nke ndị na-ekiri ekiri ka na-agbanwe agbanwe kemgbe ọtụtụ afọ. Na nkenke, ị zụrụ telivishọn, kwụọ ụgwọ ụlọ ọrụ USB maka ịnweta ụyọkọ nke ọwa, na voila, ị nwere ebe ntụrụndụ maka mgbede. Agbanyeghị, ihe agbanweela nke ukwuu dịka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ebipụla ụdọ na ihe ọ bụla ụlọ ọrụ USB nyere ha. Dabere na 2017
Dị ka 2017 si kwuo nnyocha e mere nke Leichtman Research Group, Inc., mere, 64% nke ulo 1,211 a nyochara kwuru na ha na-eji ọrụ dika Netflix, Amazon Prime, Hulu, ma ọ bụ vidiyo na-achọ. Ọ chọpụtakwara na 54% nke ndị zaghachiri kwuru na ha na-abanye Netflix n'ụlọ ha oge niile, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ (28 pasent) ndị laghachiri na 2011. N'ezie, dịka nke Q1 2017, Netflix nwere ndị debanyere aha nde 98.75 n'ụwa niile. (Nke a bụ ihe dị mma chaatị na-egosi ọnọdụ ọ na-achị ụwa.)
Ma mgbe OTT ahụla nnukwu mmụba n'etiti ndị ezinụlọ gburugburu ụwa, otu mpaghara ọkachasị na achọpụtara m ebe ọ dịla nso ọfụma traction dị na mpaghara azụmahịa. N'ime afọ gara aga ma ọ bụ karịa, ahụla m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewere teknụzụ OTT dịka ụzọ iji gosipụta ozi nke aka ha ma ọ bụ nweta onye ọzọ n'otu oge. Ike a dị oke mkpa n'etiti ndị isi na-arụsi ọrụ ike na-achọ ihe ọmụma kachasị ọhụrụ n'agbanyeghị agbanyeghị ebe ha nwere ike n'oge ahụ.
Otu ihe atụ bụ TV C-Suite, nke na-eme ihe ngosi TV m C-Suite na Jeffrey Hayzlett. N'afọ mbụ a, ọwa ahịa azụmaahịa na-achọ achọpụtara mmekọrịta Banye, “otu netwọk ntụrụndụ dị iche iche na ntanetị nkesa zuru ụwa ọnụ,” iji kesaa ihe ngosi m na televishọn na ọdụ ụgbọ elu 50 kasị ukwuu na United States na ihe karịrị 1 nde hotels na mba ahụ. Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ ịhụ ka mmemme m na-enwetakwa ọhụhụ, ọkachasị ya n’ebe ndị achọrọ ka m ruo.
N'uche m, ọdụ ụgbọelu na họtel bụ nke doro anya ụfọdụ n'ime ebe kachasị mma iji weghara anya nke ndị njem na-ahụkarị bụ ndị na-achọpụtakarị na naanị oge ezumike n'oge ụbọchị bụ mgbe ha na-eche ijide ụgbọ elu ma ọ bụ na-atụrụ ndụ n'ọnụ ụlọ nkwari akụ (were ya n'aka mmadụ onye ma ihe a niile).
Tupu, ọ bụrụ na onye isi ọchụnta ego chọrọ ile ihe ngosi azụmaahịa ọ bụla, ọ ga-eme ya "ụzọ ochie" nke ile ya n'oge a kapịrị ọnụ. Mana site na iwebata teknụzụ OTT, ha nwere ike ịnweta mmemme nke na-ezute ọdịmma ha na usoro iheomume nke ha.
Ekwenyesiri m ike na nkà na ụzụ OTT ga-anọgide na-eto eto ruo n'ọdịnihu ka anyị na-aghọwanye ọha mmadụ nwere ọganihu. Ọganihu a ga-enyere ndị azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa n'otu n'otu aka ijikọ ọnụ na mba ụwa na-enweghị mgbochi ndị ndị na-enye USB nyere anyị ogologo oge. Dika ichoro inweta ngwa ngwa na ihe omumu ihe omumu na abawanye, o gha adi ihe obi uto ihu uzo OTT ga esi were anyi. Amaghị m banyere gị, mana m ga na-ege ntị iji chọpụta.
Tags: amazon eluTV C-SuiteC-Suite na Jeffrey Hayzletthululeichtman nyocha otuNetflixottn’elu-n’eluBanyevideo na ina